Lammiiwwan Sudaan Hiriira Mormii Geggeessan
Mormii Sudaan keessaa, Kaartuum, Sadaasa, Nov. 21, 2021.
Lammiiwwan Sudaan kumaan laka’aman, fonqolcha mootummaa kan waraanni baatii Onkoloolessaa keessa geggeesse mormuu dhaan Kartuumii fi kutaalee biyyattii ka biroo keessatti hiriira mormii geggeessanii jiran.
Poolisiinis hiriirtotam masaraa prezidaantummaa cinatti hiriiran kana bittimsuuf gaazii imimmaansu gargaaramuu hiriirtonni kun dubbataniiru. Associated Press akka gabaasetti, magaalaalee Kartuumiin ala jiran, Kasalaa, Sennar fi Port Sudan keessatti illee hiriiraawwan mormii geggeessamaniiru.
Waraanni Sudaan Onkoloolessa 25 aangoo qabachuu dhaan mootummaa ce’umsaa biyyattii keessa kanneen jiran angawoota hedduu to’annaa jala oolchee jira. Ebla bara 2019 warraaqisi uummataa ka’ee hoogganticha yeroo dheeraa Omar al-Bashiriin aangoo irraa darbee as fonqolchi mootummaa geggeessamuun yeroo lammataa ti..